Sat, Dec 14, 2019 at 5:13am
सोमबार, २७ श्रावन २०७६,	आहाखबर	2.3K
सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्किएका छन् । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिंगापुर गएका प्रधानमन्त्री ओली सोमबार मध्याहन्न काठमाडौँ आइपुगेका हुन् ।
विमानस्थलमा ओर्लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली पत्रकार सम्मेलन नगरी सिधै निवास तर्फ प्रस्थान गरे । उनको स्वास्थ्य अवस्था, हालै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएका विवादास्पद अभिव्यक्ति, जम्मू–कश्मीर मुद्दा तथा पार्टी एकता प्रक्रियाका बारेमा पत्रकारले प्रश्न गर्न सक्ने सम्भावनाका कारण ओली केही नबोली निवास तर्फ प्रस्थान गरेको अनुमान छ ।
आफ्नो भ्रमण अनौपचारिक भन्दै उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेनाको सलामी ग्रहण भने गरेनन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वास्थ्य ठीक रहेको जानकारी दिनेबाहेक अन्य प्रतिक्रिया दिएनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरेनन् । हिड्दा–हिड्दै पत्रकारहरुले तपाइलाई कस्तो छ ? भनी गरेको प्रश्नमा उनले भने-'मलाई ठीक छ'। ओलीले सिंगापुरको नेशनल युनिभर्सिटी हस्पिटल (एनयुएच) मा स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए ।
१२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणलाई उत्तिकै महत्व दिँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका साथमा उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाह, स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसहित नौ सदस्य सहभागी थिए ।